Dowladda Soomaaliya oo soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo Cabdirashiid Janan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo...
Dowladda Soomaaliya oo soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo Cabdirashiid Janan
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska Booliska Soomaaliya ayaa soo saaray waaran caalami ah oo ku aadan soo qabashada Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan.
War-saxaafadeed ka soo baxay Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa looga dalbaday Booliska Caalamiga ee Interpol inay ka qayb qaataan soo qabashada Cabdirashiid Janan oo gacanta dowladda Soomaaliya ka baxsaday.
Sidoo kale, qoraalka ayaa dowladda Kenya looga dalbaday inay soo gacan geliso eedeysane Cabdirashiid Janan oo ku eedeysan arrimo ku saabsan xuquuqul Insaanka.
Taliska Booliska Soomaaliya
waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo Cabdirashiid Janan